ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့အကြို တပ်ထောက်ခံပွဲ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေလုံခြုံရေးယူပေးနေ - Myanmar Pressphoto Agency
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့အကြို တပ်ထောက်ခံပွဲ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေလုံခြုံရေးယူပေးနေ
MaBaTha MPA Myanmar News SilentStrike Yangon
News January 31, 2022 ·0Comment
By MPA [ English Below ]
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့အကြို တပ်ထောက်ခံပွဲကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေလုံခြုံရေးပေးကာ ယနေ့ကျင်းပနေသည်။
“တပ်ထောက်ခံပွဲနေ့က မနက်ဖြန်မှ ကြေညာပြီး အခုကြိုလုပ်နေကြတာ။ ရှစ်မိုင်မှာ လမ်းပါပိတ်ထားတယ်။ပြည်သူက ထောက်ခံပါတယ်ဆိုပြီး တပ်ကပါ လုံခြုံရေး ပေးနေတာဆိုတော့ ရယ်နေရတယ်”ဟု ရှစ်မိုင်အနီးနေသူတစ်ဦးက သတင်းပို့ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယနေ့မနက် ၁၀နာရီက စတင်ပြီး ရှစ်မိုင်၊စိမ်းလန်းစိုပြေအနီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ တပ်သားများနှင့် ရဲအင်အားအချို့ ချကာ စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်သူတွေ စုဝေးလျက်ရှိသည်။
ယင်းနောက် ပြည်လမ်း အင်းလျားကန် ဘောင် ရှေ့တွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ DC ကားအမျိုးအစား ၃စီး၊ Sino Truck ကားကြီး ၁စီး တို့နှင့်အတူ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်သား ၂၅ဦးခန့် လုံခြုံရေးယူကာ တပ်ထောက်ခံသူတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိသည်။
“အခုလှည်းတန်းဘက်လာနေပြီ။အင်္ကျီအဖြူအရပ်ဝတ်နဲ့ အကြမ်းဖက်ခွေးသားတွေက လူတွေကြားထဲနေရာယူပြီး ကင်းထောက်လုပ်ပေးနေတယ်”ဟု မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ထောက်ခံသည့် တပ်ထောက်ခံသူများသည် ရှစ်မိုင်မှ မာလာဆောင်၊ မာလာဆောင်ဘက်မှ လှည်းတန်းသို့ အင်အား ၂၀၀နီး ပါးခန့် ချီတက်နေကြောင်း လှည်းတန်းရှိ မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပြောသည်။
#တပ်ထောက်ခံပွဲ #အကြမ်းဖက်စစ်တပ် #အသံတိတ်သပိတ် #Myanmar #MPA
Terrorist SAC Troops Provide Security on Eve of February 1st Military Support Rally
The eve of February 1st Military support rally is being held with the terrorist SAC troops providing security.
“The military support rally was announced to be for tomorrow but it’s being held in advance. Even the road is blocked at eighth mile.
It’s hilarious that it’s called people’s support rally and the army itself providing security”, said an eighth mile resident who sent the news.
This morning beginning from 10am, the military supporters are gathering near Sein Lan So Byae, eighth mile with the terrorist SAC troops and some police providing security.
After that, in front of Inya Lake, about 25 terrorist SAC troops are guarding the military supporters on three DC type terrorist SAC cars andaSino Truck.
“Now they are coming towards Hledan. Terrorist bitches in white shirts are scouting amongst the people”, explained an urban guerilla force member.
Currently, the terrorist military supporters are coming from eighth mile to Malar hall, from Malar hall to Hledan with around close to 200, said an urban guerilla force member in Heldan.
#MilitarySupport #TerroristMilitary #SilenceStrike #Myanmar #MPA